RAMPANANA Raymond no tompon'andraikitra ara-pedagojia mandrindra ny fampianarana ankapobeny amin'ny Lycée (2nde, 1ère, T. ACD) eto amin'ny IFR. Voafidy hitana izany izy amin'ny maha mpampianatra raikitra azy eto amin'ny sekoly sy noho ny mari-pahaizana "Licence en Lettres sy ny traikefa ananany (42 taona teo amin'ny sehatry ny fanabeazana)
Manomboka ny kilasy faha-6 ka hatrany amin’ny kilasy famaranana A, C sy D ny fampianarana ankapobeny eto amin’ny sekoly. Mandray ny mpianatra rehetra nahazo ny CEPE sy ny BEPC izy ho an’ny kilasy faha-6 sy ny kilasy faharoa, nefa koa mandray ireo mpianatra miditra eo anelanelany aorian’ny fitsapam-pahaizana manokana momba izany (test de niveau)
Mpampianatra nivoaka avy tamin’ny toeram-panomanana ambony (ENS Ampefiloha) sy teny amin’ny oniversiten’Antananarivo no mifandrimbona manatanteraka ny fampianarana eto amin’ny IFR. Mpanabe ihany koa izy ireo no sady olon’ny Fiangonana avokoa.
Ankoatra ireo taranja takiana amin’ny fandaharam-pianarana dia mianatra informatique ny mpianatra ary manaraka ny fandaharana voarakitra ao anatin’ilay tetikasa « Informatique pour tous » iarahana amin’ny Telma Fondation sy ny Microsoft. Mahazo connexion internet avokoa ny mpianatra ankoatra ireo boky maro azony ampiasaina ao amin’ny tranombokin’ny sekoly.
Ny sekoly dia mitondra ny mpianatra manao fitsidihana Orinasa sy fitsidiham-paritra isan-taona. Eo ihany koa ny kilasy maintso sy ireo “activités parascolaires” maro azon’ny mpianatra isafidianana.
Toy izao ny vokam-panadinana farany teto amin’ny sekoly, izany hoe ny taom-pianarana 2016-2017:
BEPC : 93,02% - BAC A1: 75% - BAC C: 42,85% - BAC G2 : 94,11%
BEP: 91,66% - BAC A2 : 71,42% - BAC D: 42,10%